ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ? - Onlines Time
November 11, 2020 November 11, 2020 onlinestimeLeaveaComment on ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मुल्य ह्वात्तै घटेको छ । सोमबार ५ सय रुपैयाँले बढेको सुनको मुल्य आज तोलामा ३ हजार ४ सय रुपैयाले घटेको हो ।
सोमबार प्रतितोला ९८ हजार २ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज घटेर प्रतितोला ९४ हजार आठ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९४ हजार तीन सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको जनाइएको छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । आज चाँदीको मूल्य एक हजार दुई सय १५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ ।
बुटवल, रुपन्देहीको सै’नामैनामा नेपालकै ठूलो क्रिकेट रंगशाला ब’न्ने भएको छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला नामाकरण गरिएको रंगशाला सै’नामैना ७ ल’म्टैयामा रहेको करिब १५ बि’गाहा जग्गामा निर्माण हुन लागेको हो ।नगरपालिकाले रंगशाला निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ। गत वर्ष ३० लाख रुपैयाँ छु’ट्याएर मै’दान सम्याउने, शौ’चालय र ड्रे’सिङ रूम निर्माण गरिएकोमा यस वर्ष एक करोड बजेटमा माटो क’टिङ, ता’रबार र डि’पिआर बनाएको छ। यसअघि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा रंगशाला निर्माण गर्नुपूर्व नगरपालिकाले यही स्थान रंगशालाको लागि फा’उन्डेसनलाई दिने भनेको थियो।
तर उक्त रंगशाला चितवनमा निर्माण गरिए पनि नगरपालिका आफैंले निर्माण गर्न लागेको हो। रंगशाला निर्माण स’म्पन्न हुन करिब २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ। रंगशालाको लागि ल’म्टैयास्थित नि’र्माणाधीन सै’नामैना उ’द्योगग्रामदेखि पूर्वतर्फको ९४८१७ वर्गमिटर क्षेत्रफल समेटिएको छ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट करिब १२ किमी उत्तरतर्फ निर्माण हुन लागेको उक्त रंगशाला नेपालकै सबभन्दा ठूलो ९० र्‍या’डको रहेको नगरपालिकाका प्रमुख चित्र बहादुर कार्कीले दा’बी गरे। रंगशाला निर्माणका लागि नगरपालिकालाई प्रदेश र संघीय सरकारले आ’र्थिक सहयोग गरेका छन्।
खेल पर्यटनमार्फत् सै’नामैनाको विकास गर्ने उद्धेश्यले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्न लागिएको नगर प्रमुख कार्कीले बताए। बजेट व्यवस्थापन गरेर रंगशालाको लागि यसै वर्ष ठे’क्का प्रक्रियामा जाने समेत प्रमुख कार्कीले बताए। रुपन्देही जिल्ला क्रिकेट खेलाडीहरूको उ’र्वरभूमि भएको र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई केन्द्र पनि नजिकै भएकोले यस रं’गशालालाई खेल आ’योजना गर्न सहज हुने अ’पेक्षा गरिएको छ। रुपन्देहीमा भैरहवा, ति’लोत्तमा र कं’चन गाउँपालिकामा समेत क्रि’केट मै’दान छन्।
बिप्लबका छोरा प्रकाश र दुर्गा प्रसाईं बिचको पछिल्लो अडियो रेकर्ड बाहिरियो (भिडियो सहित हेर्नुहोस)
आफ्नै मालीकसँग श्री’मतीलाई कोठामा रं’गेहात भेटे”पछि, हेर्नुहोस यस्तोसम्म भयो || (भिडियो हेर्नुहोस)
बधाई ! नायिका प्रियंका कार्की आमा बनिन्
September 22, 2021 September 22, 2021 onlinestime